बिहे गरेको ४५ दिनमा खुल्यो यस महिलाको पोल: सच्चाई जानेपछि पर्नु हुनेछ तपाई आश्चर्यचकित !  Hamrosandesh.com
बिहे गरेको ४५ दिनमा खुल्यो यस महिलाको पोल: सच्चाई जानेपछि पर्नु हुनेछ तपाई आश्चर्यचकित !
बिवाह केटा र केटिबीच मात्र हैन की दुई परिवारका बीच पनि जोडिने एक बिशेष साईनो हो। यसैले अहिले पनि हिन्दु परम्परमा मागी बिवाह नै बढी रुचाईने पनि गरिन्छ। तर भारतको राजस्थानमा यस्तो घटना बाहिर आएको छ, जहाँ एक बेहुलीले बिवाहलाई एक मजाक बनाई दिईन।
भारतीय समाचारहरुका अनुसार राजस्थानका एक ब्यापारी मनिज जैनलाई विवाहको नाममा धोका दिएको खबर शार्वजनिक भएको छ। यहाँ एक माया नाम गरेकी महिलाले जनवरीमा मनिजसँग बिवाह गरिन् र ४५ दिन सम्मसँगै पनि बसिन्। त्यसपछि उनले मनिज्को घरबाट करिव ७ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन चाँदीका गहना र अन्य सरसमान सहित फरार भईन।
राजस्थान प्रहरीको सूचनाको आधारमा मायालाई इंदौरबाट गिरफ्तार गरिएपछी यी घटनाको खुलाशा भयोकी ति महिलाले फर्जी बिवाह गर्दै धनि पुरुष लुट्ने सिरियल लुटेरापो रहिछिन माया । यससंगै यो पनि खुलासा भयो कि माया पहिले नै विवाहित महिला रहेछिन। र उनको या काममा उनका पति पनि साथ दिँदै आएका रहेछन।
गिरफ्तारीपछी मायाले बताए अनुसार उनको पति संजयले उनलाई जैन परिवारको केटि भएको भन्दै फोटो पठाएका थिए। फोटो जैन परिवारले मन पराएपछी विवाहको कुरा छिन्ने पनि उनकै पति नै थिए। यसको लागि उनले उज्जैनमा नेहा जैनको नाममा आफ्नी पत्नी मायाँको आधार कार्ड बनाएका थिए।